Afropricheski iyo tidcin Afrika
aad halkan: Home timaha Care isbedelka muuqaalka, Beddelidda Lives ...
isbedelka muuqaalka, Beddelidda Lives ...
timaha Tani lagu karintiimayn doonaa dadkii badnaa ka, sida Man a, iyo Haweenay. tidcin Afrika isla nooleynaya dhawr sano. Haddaba, madaxa dheer iyo qarada waaweyn oo timaha ma sii jiri doono riyo oo ay noqoto mid dhab ah.
waxaa jira kiisas, markii hiwaayadda Qaniimada jare Perm timaha lagu guulaysan ama chemistry. Waxa ay u muuqataa lanooga this, meel dhexaad ah, unpleasantly. Xaaladdan ayaa la badbaadin karaa oo keliya afrokosichki. timaha kala duwanaansho noocan oo kale ah u baahan tahay daryeel maalmeedka iyo dhaqashada. Oh gabdhaha og, siday ugu adag tahay inay timaha subaxdii ama lala iman lahaa timaha aan caadi ahayn (tus, Cascade xiiro).
Waxa intaa dheer in dhammaan ee kor ku xusan, tidcin Afrika bedeli doonaa midabka ah ee timahaaga aan midabayn. kala duwan oo ka mid ah macdantaa macmal ah oo kala duwan midab ku haboon dadka ugu geesinimo ee hooska ugu cad, iyo ka badan oo nabad ah. Codka Gentle la alternated kara midabka timaha dabiiciga ah, sidaas ku abuurtay dyeing saamaynta ama midabaynta.
Waxa intaa dheer in midabo kala duwan, oo waxaa jira dhawr nooc oo ah afropricheski. pigtails aan caadi ahayn waa kuweyga, "Live" (caaradda of tufi waa dabada), saamayn Faransiis iwm.
timaha Tani waa waqti lumis. isaga Si bartey gooyay, tidcin weaves 2-3 sayidkiisa. Laga soo bilaabo caado ka kacsanaanta muruq, Maalintii ugu horraysay waxay noqon kartaa madax xanuun. In ka maalmood ee soo socda, wax walba oo soo noqon doono in ay gobolka caadiga ah. dadka, hab nololeed firfircoon (cayaar, cayaaraha), waxay keeni kartaa cuncun meelaha xuduudaha ah, waji iyo timaha. Tani ma aha xasaasiyad. madaxa cover Durriin kaliya lama loo isticmaalaa in lagu xirto cuf sida, oo markii ugu horeysay ka jawaabaan miisaanka tidcin.
Dhaq timaha cusub, waxaad samayn kartaa maalintii ugu yaraan. laakiin, afrokosichki abuurtay in nolosha fududeeyo (akhri, sida loo soohi tidcin Afrika). Sidaa darteed, jeer timaka ma saamayn doonto afropricheske todobaadkii. Waxa ugu weyn ee - Waa wanaagsan tahay in iska maydh haraadiga shaambo, haddii kale waxa qallajin doonaa, iyo madaxa bilaabo inuu madly cuncun. Haddii dhibaato weli ka dhacay, si fudud timahaaga dhaqdid. Wash tidcin aad u raaxo geed isbonji la jilicsan. Looma baahna in la xoqin ay, codsan beeyo, qaboojiyaha, luqluqdo. Ka dib markii nidaamka biyaha lagama maarmaan ah in timaha qoyan tuwaal oo qalalan.
Marka wakhtigu yimaado inay ka soo saarto tidcin ah, si fiican u soo jeesan odaygii. sidaas darteed, habka lagu qaban doonaa si dhakhso ah wax badan oo aan xanuun lahayn. Haddii ay taasi suurtogal ma aha, aad sameyn karto naftaada Soohiddii. Timaha waa in had iyo jeer qalalan. bilowga ah, aad u baahan tahay si aad u hesho a pigtails meel, halkaas oo dhamaadka timaha u gaar ah, ... oo jaro qayb ka mid ah isku dardaro. Markaas, iyadoo la isticmaalayo shanlo dabada ah in meesha laga saaro hadhaagii oo dhan xarig koob fiber Afrika. Iyada oo ma shanlo adag in timahaaga ugu tagay. Ha lacagta cabsi timaha shanlada ma noqon. sida caadiga ah, maalin kasta, qof kasta oo inaga mid ah ku dhacaa, oo ku saabsan 100 volosinok. In timaha zapletennoj
meel ay aadaan, waxay dhaco nalalka ay, iyo sii joogi safka. Ka dib markii ay ka saareen timaha tidcin dhintay dhaco in u tiro badan.
Waxaa jira sababo for afrokosichek:
– seborrhea; – jaf;
– qaadmay, xoq;
Sida loo tidicdo tidcin Afrika?
Cascade xiiro Haweenka
category: timaha Care